PassbeeMedia: Coupon Mobile ah oo Dhamaystiran, Boorsada iyo Madal Daacad u ah | Martech Zone
PassbeeMedia: Coupon Mobile ah oo Dhamaystiran, Boorsada iyo Madal Daacad ah
Khamiis, Juun 17, 2014 Arbaco, Juun 16, 2014 Douglas Karr
PassbeeMedia wuxuu u oggolaanayaa dadka isticmaala inay si fudud u abuuraan una qaybiyaan moobiil-diyaarsan Buugga Apple Passbook, Google iyo Samsung Wallet dalabyada maxalliga ah, heshiisyada, iyo rasiidhada macaamiisha adduunka oo dhan oo leh is-gaarsiin fudud oo is-adeegsi ah oo macaamiisha ku gaadha halka ay ku sugan yihiin khadka tooska ah iyo aaladda moobilkooda.
In kasta oo aaladaha kale ee suuqgeynta suuq-geynta ay bixiyaan astaamo kooban, PassbeeMedia waxay leedahay agab dhameystiran oo ah qalabka suuqgeynta mobilada - oo ay kujiraan rasiidh QR code, fariin qoraal ah, tikidhada dhijitaalka ah, boorsooyinka dhijitaalka ah, iBeacon, barnaamijyada daacadnimada iyo kaararka, URL-yada gaagaaban, iyo xitaa barnaamijka whitelabel ee hay'adaha.
Sida Loo Bilaabo PassbeeMedia
Xulo mid ka mid ah afarta qorsho ee qiimeynta dhameystiran taasi waxay ku habboon tahay ganacsigaaga. Laga soo bilaabo ganacsiyada shaqsiyadeed iyo kuwa yaryar, ilaa ganacsiyada dhexdhexaadka ah ama xitaa shirkadaha waaweyn.
Dhis Bixintaada - ka dooro mid ka mid ah sheybaaradeena horay loo sii qorsheeyay ee xirfadeed si aad u habeysid ololahaaga. Ama haddii aad abuurto naqshad aad jeceshahay inaad mar labaad isticmaasho, waad u keydin kartaa sidii arrimo cusub.
Qaybi & Suuqa - Ku xir awoodda buuxda ee Baraha Bulshada, SMS iyo Email si aad ula xiriirto dhammaan macaamiishaada mustaqbalka.
Lasoco dalabyadaada isbeddellada, qaybinta isticmaaleyaasha iyo waxqabadka barxadda iyadoo la adeegsanayo muraayada gorfeynta PassbeeMedia.
Bixinta: Waxaan ku xiran nahay Passbeemedia!
Tags: buugga tufaaxatikidhada dhijitaalka ahboorsada dhijitaalka ahjeebka googlejeexjeexakuuboonada deegaankaheshiisyada maxalliga ahdalabyada maxalliga ahkaararka daacadnimobarnaamijka daacadkuuboonada wareegamadal suuq mobilepassbeemediaqr lambarrada rasiidhadabarnaamijka abaalmarintajeebka samsungurl gaagaabanSMSfariin qoraal ahmobayl la daabici karo
Strikingly: Ku soo gal LinkedIn goob qurxoon, Dib-u-habeyn Moobil ah
16 Talaabo oo lagu Qasbayo Abuurista Mawduucyada